Ekipa mpamoaka lahatsoratra ▷➡️ VidaBytes | LifeBytes
LifeBytes dia tranonkala Internet AB. Amin'ity tranokala ity dia mampahafantatra momba ny main vaovao, fampianarana ary fika momba ny tontolon'ny teknolojia, lalao ary solosaina. Raha tia teknolojia ianao, raha mandeha amin'ny lalan-drà ny rà teknisianina dia ny Vidabytes.com no tena tadiavinao.
Hatramin'ny nanombohana azy tamin'ny 2008, VidaBytes dia tsy nitsahatra nitombo isan'andro mandra-pahatongany ho iray amin'ireo tranonkala lehibe ao amin'ny sehatra.
Ny ekipa mpamoaka lahatsoratra VidaBytes dia ahitana vondrona iray manam-pahaizana momba ny teknolojia. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Dokam-barotra sy mpamorona sary. Amin'ny fanofanana mitohy amin'ny resaka fandaharana. Ny fianarana ny zava-drehetra manodidina ny tontolon'ny teknolojia dia tena ilaina ankehitriny.
Vao 18 taona aho no nikasika solosaina voalohany. Talohan'izay dia zara raha nampiasa azy ireo aho tamin'ny filalaovana fa nanomboka teo dia afaka nitsambikina sy nianatra siansa momba ny informatika aho amin'ny maha mpampiasa azy. Marina fa nanapaka vitsivitsy aho, saingy nahatonga ahy tsy hatahotra ny hanandrana sy hianatra fehezan-dalàna, fandaharana ary lohahevitra hafa manan-danja ankehitriny.
Ny mombamomba ny ekipa fanoratana ankapoben'ny VidaBytes.
Ny Update Today dia tranonkala natokana ho an'ny tontolon'ny rindrambaiko sy rafitra izay nanatevin-daharana ny VidaBytes taona vitsivitsy lasa izay ary amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'ity tranokala ity ny atiny rehetra.
Teknisiana informatika. Mpianatry ny Computer Systems maniry ny hanampy ny rehetra hianatra tsikelikely momba ny teknolojia.
Networks ao amin'ny tambajotra
Redesenred dia tranonkala taloha momba ny Networks and Computers izay ao anatin'ny Vidabytes.com amin'izao fotoana izao